IIMPAHLA EZINGAMA-36 EZIGQWESILEYO ZOBUKHULU BOBUCHULE 2021 -IMPAHLA YOKUSEBENZA EPHEZULU YOKUDIBANISA - UMSEBENZI WOKUSEBENZA
Iimpahla ezingama-36 eziGqwesileyo zokuSebenza kunye nezoLungileyo kwaye zikhululekile
Eyona / Umsebenzi Wokusebenza
Ukufumana iimpahla zokuzilolonga ezifashiniweyo kwaye ukusebenza kunokuba ngumsebenzi, nokuba unganxiba bungakanani. Kodwa ukuba ufana Umndilili waseMelika onxiba ubungakanani be-16 okanye ngaphezulu, kunokuba nzima nangakumbi.
Jonga nge-leggings, ii-armholes eziqinileyo, kwaye ungonwabisi ezemidlalo ngengalo ziqheleke kakhulu xa kufikwa kumba wokuzilolonga nobungakanani beempahla zokuzilolonga. Iindaba ezimnandi zezi, iinkampani ezininzi (ezinje I-Nike kwaye imbaleki ) benze amanyathelo abalulekileyo abhekisa kubungakanani obubandakanyayo kwiminyaka yakutshanje. Kwaye, imakethi ibonile ukonyuka kwenani leempawu zempahla ezenziwe ngokukodwa kubafazi ababalaseleyo (ekugqibeleni!).
Ukuba ulungele ukutyala imali kwinto entsha yokusebenza, jonga uluhlu olungezantsi. Sichithe ezona zinto zingcono zokuzilolonga ukuze ungadingi ukuchitha iiyure ukhangela kwi-intanethi. Uya kufumana imilenze emnandi , iimbaleki, iibhulukhwe ezimfutshane, iitanki, iti, iziqwenga zezityalo, iibras zezemidlalo, iiyunithi, kunye nebhatyi yemvula ukuze uhlale ukhululekile kulo naluphi na uhlobo lwemozulu. Olunye ukhetho lwethu luhamba kunye-kodwa zive ukhululekile ukudibanisa kunye nokudibanisa.
Izinketho ezingama-30 + apha zivela kwimveliso eyaziwayo, kunye nabanye abayili abaza kubakho. Elona candelo lililo? Akukho nto ixabisa ngaphezulu kwe- $ 100. Kuyinyani: Ngokwenyani akufuneki uchithe imali eninzi ukufumana iimpahla ezikumgangatho ophezulu ezisebenzayo nezibonakala zintle kuwo nawuphi na umzimba.
Ukulungele ukubila kwisitayile? Qhubeka uskrole — sibheja ukuba awuyi kuyenza kude kakhulu ngaphambi kokubeka into kwinqwelo yakho yokuthenga.
Le tanki inephaneli elingasemva elinemingxuma yokuphefumla kunye nokungenisa umoya, kwaye ubude bayo betonki kunye ne-hemline egobileyo kuya kukugcina ukhuselekile kakuhle ngexesha lokuzilolonga. Iza ngaphezu kwemibala eyi-10, kubandakanya neprinta yokubopha idayi.
2 Ibhayisekile ye-LIVI Mfutshane Umgaqo uBryant Umgaqo uBryant$ 24.95 THENGA NGOKU
Abathengi bathanda ukuziva kwezi bhulukhwe zimfutshane zebhayisekile, kwaye bathi i-inseam ende iyathandeka kwaye ibhandeji esinqeni ayiqengqeleki. Xa ungasebenzi, benza isiseko esigqibeleleyo phantsi kwengubo.
3 Okulandelayo – kuye – ukuhamba ze umzimba UMGANGATHO WONKE Umgangatho Jikelele$ 88.00 THENGA NGOKU
Uphawu lwe-Universal Standard lwakhiwe kubungakanani bokubandakanywa. Ngalo mzimba, awusoze ube nexhala malunga nehempe ezikhwele phezulu (okanye iibhulukhwe ezimfutshane ezijikelezayo ezantsi!) Phakathi kuqeqesho. Kwaye ilaphu lokujija ukubila lithambe kakhulu.
4 Ukuphefumla kwi-Mock-Neck Twist-Hem Top Umkhosi wamanzi wamandulo Umkhosi wamanzi omdala yibhabha.com$ 27.00 THENGA NGOKU
Nokuba uhamba uhambo ngentsasa ebandayo okanye uphume usuku lokuskiya kwimithambeka, le top efikelelekayo iya kukugcina ufudumele kwaye womile. Iinkcukacha zangaphambili ezinamaqhina zongeza ukujija kwemfashini (ngokoqobo) kwaye ilaphu elikhethekileyo lokufuma lifuna ukubila kude.
ulahlekelwa njani ngamanqatha esisu aneenkani
5 Ultimate Stash Pocket Camo Tight imbaleki imbaleki imbaleki.gap.com$ 89.00 THENGA NGOKU
Ngokuprintwa okumnandi, iipokotho ezininzi, kunye nelaphu elithambileyo, elilungele ifom, zininzi izinto onokuzithanda malunga nale milegings. Ibhande lesinqe libonisa uhlengahlengiso olupheleleyo lwe-NeverEnd ukuze bangatyibiliki ngexesha lokuzilolonga kwakho, kwaye umtya ngokwawo awuyi kulahleka ekuhlambeni.
6 Uboya V-Neck Phezulu nike I-Nike nike.com$ 49.97 THENGA NGOKU
Esi sakhiwo sicociweyo kodwa si-slouchy senza ulungelelwano olukhulu kunye nokuhamba komoya okuninzi, kunye noboya bayo obuthambileyo obumbethe ubushushu buxhoma ukubila. Kuza ngombala oluhlaza, omnyama nomhlophe.
I-lymph nodes ezivuvukile entanyeni covid
7 Ubungakanani obuDibeneyo bokuSonga iCapri Ubukhulu Bam Nje Ubukhulu Bam Nje$ 15.95 THENGA NGOKU
Ezi leggi ze-capri ziphantse zavavanywa kwiinkwenkwezi ezi-5 000 kwiAmazon, kwaye zibiza iqhezu lezinto ezininzi ezaziwayo ezithengiswayo. Ibhonasi: Umzekelo oqaqambileyo noxakekileyo uya kunceda ukufihla nawaphi na amanqaku okubila.
8 Catalyst Ngaphambili Zip Sports Bra IKnix IKnix$ 89.00 THENGA NGOKU
Iibhrasi zezemidlalo zinokuba yintlungu yokutsala, kwaye xa sele zivuliwe, zinokuziva zithintela. Uyilo lwe-zip langaphambili luya kwenza ukuba unxibe kube lula kakhulu, kwaye imitya enqamlezileyo ibonelela ngenkxaso ephezulu. Iza kubukhulu obungama-32A ukuya kuma-42G.
9 Ekwindla i-Amethyst ephezulu-esinqeni amaLeggings IKente yedijithali DigitalKente$ 65.95 THENGA NGOKU
Olu hlobo lweetoni ezinamatye anqabileyo luphefumlelwe ngelaphu laseGhanian kente. Zifumaneka ngobukhulu S ukuya kwi-6XL kwaye inkampani ithi ayizukuphulukana nokolula kwayo nokuba ungahlamba kangaphi.
10 Itanki yeTekhnoloji eSebenzayo yeWicking Torrid Torrid$ 25.87 THENGA NGOKU
Le tanki yokujuluka ibila ifom-efanelekileyo ukuze ungakhathazeki malunga nelaphu elixekekileyo eliphazamisa ukuhamba okuphezulu, kodwa ukurhwaphiliza kongeza ubume obuncinci ukuze ungaziva ngathi yonke into yomzimba wakho iyagxininiswa.
Shumi elinanye Ukunyuka okuphezulu kwePokotho Intombi eyintombazana Intombi eyintombazana$ 78.00 THENGA NGOKU
Amagqabantshintshi ahlanganisiweyo amantombazana axhasa kakhulu, opaque, kwaye awasoze aqengqeleka phantsi. Ziza zinemibala emininzi eyahlukileyo kwaye zenziwe ngeebhotile zamanzi zeplastiki ezihlaziyiweyo!
12 IsoftWik V-Intamo Tee Ngamandla UJuno uyasebenza junoactive.com$ 69.95 THENGA NGOKU
Ngamanye amaxesha ufuna iteyiphu elula elula. Lo ususa ukufuma kude nolusu lwakho, kwaye uphawu luthi lusebenzisa itekhnoloji ekhethekileyo ukukugcina womile njengoko ubushushu bomzimba wakho bukhuphuka. Ikwayilelwe nangokubopha intamo engena chafe.
13 I-Mid-Rise French Terry Tapered Joggers Umkhosi wamanzi wamandulo Umkhosi wamanzi omdala yibhabha.com$ 29.97 THENGA NGOKU
Ababuyekezi bahlambalaza malunga nokuzihlaziya, ukungahambi kakuhle, kwaye bayayithanda indlela izinto ezigcinwe ngayo ngokuhamba kwexesha. Nokuba uzityibilika ekuhambeni okanye ukwenza iyoga, awunakufuna ukuzisusa!
14 I-Yoga kunye neLuxe Crop ephezulu I-Nike I-Nike$ 27.50 THENGA NGOKU
Umqolo obuyiselweyo nomphambili wale ndawo yolulekileyo yezityalo mhle kwaye comfy. Kwaye imitya ebanzi inceda ukugcina yonke into ikwindawo. Ibhonasi: Imathiriyeli kukubila.
Shumi elinantlanu Ubungakanani boBungakanani boLuhlu lweFlethi engaphambili yezeMidlalo RBX RBX THENGA NGOKU
Ayisiyiyo kuphela le yegalufa / yentenetya skort eneepokotho ngaphandle, kodwa kukwakho nepokotho kwibhokisi ezimfutshane zebhayisekile ezantsi apho ungayifaka khona ifowuni yakho. Ubungakanani be-1X bunobude obusinqeni ukuya kwi-hem ye-18.5 ye-intshi ngaphambili kunye nee-intshi ezingama-20 ngasemva ukubonelela ngesigqubuthelo ngelixa i-inseam yeebhulukhwe ezingaphantsi zii-intshi ze-4.5 ukunceda ukukhusela ukubethwa.
16 Kuyilwe 2 Hambisa AEROREADY Dance Tank Phezulu adidas adidas adidas.com$ 30.00 THENGA NGOKU
Le tanki ithambileyo, inamagumbi, kunye nenomoya ophefumlayo iya kuhamba kwaye igungxule kanye nawe. Ngaphezulu, i-hem yayo ende uyigubungele kuyo yonke into ojika kuyo.
17 Lungelelanisa iPant 28 Lululemon Lululemon$ 98.00 THENGA NGOKU
Ezi leggings zinenkolo-elandelayo. Abantu bahlambalaza malunga nokuthamba kwabo kunye nendlela abangabalekisi ngayo, ukuze uhambe ngokuzilolonga ngokuzonwabisa.
18 Isikipa somdlalo owomileyo I-Nike I-Nike THENGA NGOKU
Intamo ye-scoop kunye nemingxunya ebanzi yengalo yale shirt ayizukukwenza uzive uthintelwe, kwaye izixhobo zobuchwephesha zenzelwe ukukhupha ukubila emzimbeni wakho.
19 Ingubo yengubo engapheliyo ye-2-Piece Iintsomi Iintsomi$ 124.90 THENGA NGOKU
Le bhloko yezemidlalo kunye ne-legging combo intle kakhulu uya kufuna ukusebenza ukuze nje uzinxibe! I-bra inokunxitywa ngesiqhelo okanye njenge-racer-back kwaye i-7/8 leggings ine-pocket esecaleni efanelekileyo kwifowuni yakho.
Amashumi amabini Enza amandla kwi-Underwire Sports Bra Elomi Elomi$ 68.00 THENGA NGOKU
Iimpahla zika-Elomi zenzelwe abantu ababhinqileyo, kwaye eyona nto ithengiswayo ye-Energize bra ivela kubukhulu obuninzi ukusuka kwi-32GG ukuya kwi-38K ukuya kwi-46DD nayo yonke into ephakathi. Iindaba ezilungileyo kukuba akukho ukunyanzelwa okubandakanyekayo kwinkqubo yenkxaso ukuze ungabi naxhala malunga nokuxinwa kwamabele akho kunye.
amashumi amabini ananye Uluhlu lwe-QuikWik ezimbini eziMfutshane JunoActive UJuno uyasebenza$ 99.95 THENGA NGOKU
Ezi mfutshane zizinto ezimbini ezenzelwe into enye. Ufumana ukugubungela iibhulukhwe ezimfitshane kunye nenkxaso yokufaka ifom evela ngaphakathi-ungqimba omfutshane webhayisekile. IJunoActive yaziwa ngeempahla zayo ezinobungakanani obudibeneyo, kwaye abathengi bathi ibhendi ye-elastic ihlala endaweni xa ushukuma.
22 Isikipa esifanelekileyo sokubaleka kweTekhnoloji yeMesh Ikhonkco 10 Ikhonkco 10$ 28.30 THENGA NGOKU
Okokugqibela: I-baselayer eyoluliweyo, ephefumlayo, enemikhono emide engena-neckline crew neckline. Umva wonke wehempe ukwenziwe ngomnatha ukunceda ukuqukuqela komoya.
2. 3 Isleek Fit yeYoga Pant IAmazon Danskin amazon.com$ 36.00 THENGA NGOKU
Ezi bhulukhwe zeyoga zinokuhlolwa okungaphezulu kwe-1,500 yeenkwenkwezi ezintlanu kwiAmazon, kwaye zibiza imali engaphantsi kwama- $ 50! I-bootcut enesitayile kunokuba nzima ukuyifumana, kodwa iyahambelana nomthetho osayilwayo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo yonke ibhanti ebanzi ayizukumba esiswini sakho.
Eyona cream cream yolusu oluguga
24 Iziphumo zeBra eziGuqukayo zezeMidlalo pennington's Iipenningtons pennakhon.netCA $ 44.00 THENGA NGOKU
Le bray top intle ngokwaneleyo ukuba inganxitywa yodwa okanye phantsi kwehempe enezinto ezisikiweyo, kwaye ababuyekezi bathi ikulungele ngokwaneleyo ukushiya imini yonke. Ifumaneka ngobukhulu be-38D ukuya kuma-48DDD.
25 Iintyatyambo ezininzi ze-Yoga leggings Ubugcisa beFarever Ubugcisa beFarever$ 80.00 THENGA NGOKU
Umzobi ngasemva kolu luphawu uyi-yoga kunye nomhlohli we-barre, ke uyazi ukuba iilegging ziya kumelana nokusebenza. Olu hlobo luza kuhlobo olumnyama kwaye lufumaneka ngobukhulu ukuya kuthi ga kwi-6X.
26 Ijacket yemvula yeCape Cap Eddie bauer UEddie Bauer zingcbd.com$ 59.50 THENGA NGOKU
Ungavumeli imvula iphazamise ukusebenza kwakho kwangaphandle! Le bhatyi ayinamanzi kwaye iyaphefumla ngaxeshanye. Kwakhona kulula ukuthatha kunye nawe kunyuko kuba isonga ihlale epokothweni yesandla sasekunene ukuze igcinwe lula.
27 Isityalo seHeatGear Armor Ankle Crop phantsi kwezikrweqe Ngaphantsi kweArmour underarmour.com$ 45.00 THENGA NGOKU
Ezi zi-leggings zinophononongo lwe-4.6 yeenkwenkwezi. Ababuyekezi bathi bayayixhasa kwaye bayamcenga, kwaye umenzi uthi ilaphu liya kukugcina upholile kwaye womile, nditsho nakwiindawo ezishushu. Zikwabonisa iipaneli ezinemigca ebekwe ngobuchule yokuphefumla ngakumbi kunye nezinto ezine ezolula izinto ezingayi kuthintela intshukumo yakho nakancinci.
inombolo yomoya 444
28 Utyikityo Bloom Bra Bloom iBra Bloom iBra$ 79.99 THENGA NGOKU
Ingakhangeleka yahlukile kwezinye iibrazil zakho zemidlalo, kodwa iBloom Bra ithembisa ukuphakamisa ingangxoli. Yenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo, kubandakanya imitya kunye neekomityi ezinokuhlengahlengiswa! Uziphu ngaphambili uyibeka kwi-cinch, kwaye ilingana nobukhulu obungama-28C ukuya kuma-56L.
29 I-Red Lala Plus Ubungakanani bamaLeggings URochelle Porter URochelle Porter$ 69.00 THENGA NGOKU
Ezi milegings ziya kukwenza ubomi beqela nakweyiphi na iklasi yokomelela komzimba. Ayizizo zintle kuphela, kodwa ziyafumaneka kwi-2XL ukuya kwi-6XL. Kukho ne-bra yemidlalo ehambelanayo ukuba ufuna ukuphuma konke!
30 I-Tank yothando kwi-Frost Grey Elishumi elinanye nguVenus Williams Elishumi elinanye nguVenus Williams$ 69.00 THENGA NGOKU
Xa uVenus Williams esemva kwengubo esebenzayo, uyazi ukuba iya kuba yefashoni kwaye iyasebenza. Ukusikwa kwale tank ephezulu kuyathandeka, kwaye kuyafumaneka kwi-XXL.
31 Ubungakanani boDibaniso ngakumbi nge-22 'yeCore Capri Umsebenzi weembaleki Umsebenzi weembaleki$ 14.96 THENGA NGOKU
Abo banandipha ubude be-capri kodwa bayayithiya i-leggings e-tight-fit baya kuyithanda le ndlela ikhululekileyo kwi-Athletic Works. Inomlinganiso weenkwenkwezi we-4.7 kwi-Walmart kunye neerandi ezingaphantsi kwe- $ 20!
32 Itanki yamandla emithambo yamandla Usuku Won Usuku Won$ 49.00 THENGA NGOKU
Xa unganakho ukwenza isigqibo phakathi kwetanki yemisipha kunye ne-racer back one, nantsi impendulo yakho. Ine-racer back base kwaye ke umnatha wokugcwalisa ulwandlalo lwetanki yemisipha. Ubude bude ngokwaneleyo ukubonelela ngendawo apho ufuna khona, kodwa ikwajongeka intle ngeqhina elibotshelelwe esinqeni ukwenza ukubukeka kwesityalo.
33 Ubungqina beLeggings yobungqina Lukafit Lukafit$ 60.00 THENGA NGOKU
Ngaba zonke izikwere ozifunayo kula makhwenkwe amabi-inkampani ithembisa ukuba iya kuhlala endaweni. Uyilo olucekeceke phezulu luthetha ukuba bayazigubungela iirves zakho kwaye ngekhe batyibilike. Kwaye, ngubani onokumelana nomzekelo wovuyo?
3. 4 Luxe Onesie Zilolonge Zilolonge$ 89.99 THENGA NGOKU
Nantsi enye into ephumeleleyo ukuze ungabi naxhala lempahla ekhwela phezulu okanye ezantsi ngelixa uzilolonga. Umbala obomvu kunye ne-zipper encinci esifubeni yenza ukuba ibe nesitayile esongezelelweyo. Iyafumaneka ukuya kwi-XXL.
35 Imihla ngemihla icala Tie Tank Phezulu UCalia nguCarrie Underwood UCalia nguCarrie Underwood$ 25.97 THENGA NGOKU
Kwilizwe elinesithukuthezi kakhulu kwiitanki zokuzilolonga, iqhina elisecaleni kukuchukumisa okuhle. Abaphononongi bathi le ikwayinto ethambileyo. Le iyafumaneka ukuya kuthi ga kwi-3X.
36 ISpaceye eFakwe kwiMidi ePhakamileyo enamaQatha amaNqatha Ngaphandle kweYoga Ngaphandle kweYoga ngaphayayoga.com$ 97.00 THENGA NGOKU
Ngaphandle kweYoga leggings ayithambeki ngokungathandekiyo, kwaye isinqe esiphakamileyo sihlala endaweni yezinja ezisezantsi, iklasi yebhola ekhatywayo, kunye nejoggs ejikeleze idolophu. Esi sibini siza kukhetho lwepinki, oluhlaza, noblowu ngexesha lonyaka.
Ulungiso lweesangqa zakho ezimnyama-kunye nezinto ezi-5 ezingasebenziyo
Ngaba ezo Ndlela zintsha zineVinegars zilungile kuwe?
Izibhedlele ezingama-50 eziXabisa kakhulu eMelika
Iimpazamo ezi-7 ozenzayo xa upheka inyama yenyama
Ukutya Kunye Nesondlo
UAnderson Cooper uvele nje utyelelo lweeNtsana zeWyatt kwiVidiyo eNtsha
Njani uJessica Simpson ukunciphisa umzimba
ezolula kakhulu iintlungu ezisezantsi
Eyona nto ifunxa ukufuma kwamabala amabala
222 ethetha ingelosi